Imiphumela yeBrexit | Ezezimali Zomnotho
Zimbalwa izikhathi lapho kube khona umcimbi obaluleke kangako futhi izinqumo ezimakethe zezimali unjani I-Brexit. Lesi yisimo sokulahlwa yi-United Kingdom yezikhungo zomphakathi. Futhi lokho kuzonqunywa ngereferendamu ngoJuni 23. Eqinisweni, ukuphuma okungenzeka kweBrithani kungcolisa ukuvela kwezimpawu eziyinhloko zemakethe yamasheya ezwekazini elidala. Futhi imiphumela kabani ingalimaza ngokuphelele uma lesi sinqumo siqinisekiswa lapho kuvotwa ukuvota.
Kulezi zinsuku, izinsizakalo eziningana zokuhlaziywa kwamabhange anethonya elikhulu ziyaxwayisa ukuthi imali ingawa cishe ngama-20%. Futhi phakathi kwabo, iBhange laseSpain uqobo. Akungabazeki ukuthi ukuqoqa lezi zilinganiso bathathe isimo esibi kakhulu. Futhi lokho akuyona enye ngaphandle kokuhlukaniswa kweGreat Britain kusuka kuwo wonke uMphakathi waseYurophu. Ebhekene nalesi simo, akumangazi ukuthi izinkulungwane nezinkulungwane zabatshalizimali bathathe indlela yokuzivikela kakhulu: ukuphuma ezimakethe zezezimali kuze kube yilapho ukungaqiniseki kususwa.
Akungabazeki ukuthi ukuvela kwezimakethe zamasheya kuzonqunywa yileli qiniso, elizobeka inkambo yalo, ngandlela thile. Futhi yini ongayenza? uzuze kunoma yimuphi umphumela wayo. Ngamasu ahlukene okutshala imali, ngisho nokukhetha imikhiqizo emisha, eminye yayo misha kakhulu kuwe. Kunoma ikuphi, kuzobe sekusele isikhathi esingaphezu kwesonto ukwazi ukuthi yisiphi isinqumo okufanele usithathe ukuvikela imali oyongile.
1 Konke kuyaqhubeka njengakuqala
2 Imikhiqizo ongayisayina
3 Phuma e-European Union
4 Ngabe iSpain izothinteka yiBrexit?
5 Izeluleko eziyi-8 zokuvikela ukonga kwakho
Konke kuyaqhubeka njengakuqala
Uma iziphakamiso ze-Europeanist zifakwa kule referendum, kulapho uzoba namathuba amaningi okwenza izimpahla zakho zizuze ezinyangeni ezizayo. Futhi kungenzeka ukuthi ngendlela eqhumayo uma izimakethe ziphendula ngokukhuphuka isikhathi eside futhi okubukhali kusukela ngomhla ka-26 J. Kunoma ikuphi, noma ngabe kuyini umphumela wokubonisana okudumile, uzokwazi ukwenza izimpahla zakho zibe nenzuzo ezinyangeni ezizayo, njengoba ungabona kule ndatshana.
Konke kuzoqhubeka njengakuqala, inketho engcono kakhulu kuzoba yimali, ikakhulukazi eyaseYurophu, ngaphezu kwezinye izimakethe zomhlaba wonke, kubandakanya iNyakatho Melika. Bazobazwela kakhulu kulesi sinqumo. Kepha ngamanani anjani? Ngokuyisisekelo kuzoba yilabo abavela emabhange, kanye nezezimali ngokujwayelekile, ezibucayi kakhulu ekubhekaneni nokukhuphuka okuqinile kuzo zonke izimakethe zamasheya zaseYurophu, ngaphezu kwesilinganiso esijwayelekile.
Kuzoba nomunye umkhakha owamukela kakhulu, futhi uhlobene nolayini bebhizinisi olususelwa kumaphrojekthi womphakathi, azokala kabusha ngokushesha nangolaka olukhulu. Esinye salezi zibonelo simelwe yi-Aeronautical Airbus, ezokwenza umsebenzi ocacile wokuthenga amasheya ayo uma iBrexit ingaphumelelanga phakathi kwamaNgisi. Ngaphakathi kwezikhwama zezwekazi yizinkampani zaseJalimane nezaseFrance ezinamandla amakhulu okwazisa.
Mayelana nemikhiqizo okufanele uthathe izikhundla kuyo uma kwenzeka lesi simo, akungabazeki ukuthi kufanele kube ukushesha kakhulu, ngaphezu kwakho konke, ukuthi ungakwazi ukwenza ukunyakaza kube semthethweni ngesikhathi esifushane kakhulu. Futhi ngalo mqondo, izimakethe zamasheya yizona ezinconywe kakhulu, ngaphezu kwezimali zokutshala imali ezisuselwa kumasheya. Akumangalisi ukuthi lokhu kudinga izinsuku ezimbalwa uze ube ngumnikazi wamasheya abo. Futhi ngaphezu kwalokho, zihloselwe isikhathi eside.
Ngaphandle kwale miklamo uhlala njalo insiza yokubhalisa isikhwama esisohlwini isala kulezi zimakethe zamasheya. Kuyingxube phakathi kokuthenga nokuthengisa amasheya emakethe yamasheya nezimali ezihlangene. Enye indlela onayo ngaphambi kweBrexit, yize inolaka kakhulu, yimvume yokuthenga izikhundla. Izinzuzo zingaphakama kakhulu, noma ngabe zisengozini enkulu. Ikakhulukazi uma ungenalo ulwazi oluhle kulolu hlobo lwemikhiqizo yezezimali.
Imali engenayo engaguquki yaseYurophu, ngakolunye uhlangothi, nayo izosizakala kulesi sinqumo, yize ingaphansi kwamaphesenti aphansi kakhulu. Futhi ukuthi kunoma yikuphi, uzoba nethuba lokukwenza bazihlanganise nezimpahla zokulingana ukuthuthukisa imiphumela yayo. Kunoma ikuphi, uchungechunge lwamathuba luzokuvulela ukwandisa ibhalansi ye-akhawunti yakho yokuhlola. Futhi lokho kuzochazwa ngokuya ngephrofayili ukuthi njengomtshalizimali omncane okhona lapho ebeka iphothifoliyo yakho yokutshala imali ezinyangeni ezizayo.
Phuma e-European Union
Uma isinqumo saseBrithani kwi-referendum siphambene, okusho ukuthi babheja ukuthi bangahlanganisi ezikhungweni zomphakathi, akungabazeki ukuthi izinketho zokwenza imali ezongiwe zizoncishiswa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kuzofanele uphume ezimakethe zezezimali ukuze ugweme ukwehla kwemali oyilondolozayo, futhi ngokushesha nangamandla.
Kuzoba isikhathi sokushiya isikhwama izinyanga ezimbalwa, ngaphezulu kunalokho obucabanga ekuqaleni. Noma kunjalo, ngeke ube nezinhloso ezilahlekile. Unempahla eyanele yezezimali ongazuza ngayo kulesi sinqumo. Enye yazo kungaba igolide, okuthe kusukela ekuqaleni konyaka akayekile ukukhuphuka ngentengo yayo. Futhi uzokukwenza ngokwengeziwe kulesi simo esisha esivela eYurophu. Kungaba yindawo ephephile ngokugqama okungamukela ukugeleza kwemali ebaluleke kakhulu, evela kubatshalizimali, hhayi abaseYurophu kuphela, kepha evela kuwo wonke umhlaba.
Ezingeni lesibili isibopho saseJalimane, omunye umzuzi omkhulu wokunqoba kweBrexit. Futhi lokho kunjalo izosebenza njengenani lokuphephela (njengensimbi ephuzi). Indlela engcono kakhulu yokuqoqa lezi zinzuzo ezinkulu ezikhona kungaba ngezimali zokutshala imali ezisuselwa kule mpahla yezezimali ebalulekile.
Noma ngabe kunesimo esikhona, imali engenayo engaguquki ingaba yisiphephelo semali. Okuncanyelwayo ngamabhondi avela emnothweni oqinile emhlabeni. Futhi ukulahla imingcele (iSpain, iGrisi, iPortugal, i-Italy, njll.) leyo bekungaba ukuthi ukubuya kwabo kuzokwehla kanjani ezimakethe zezimali. Kulula ukuthi uyicabangele lapho ulungiselela iphothifoliyo yakho yokutshala imali. Akusizi ngalutho ama-euro amaningi ukuthi ukugembula kulezi zinsuku kunqume kakhulu umnotho.
Ngabe iSpain izothinteka yiBrexit?
Uma ithisisi evuna ukuphuma kweGreat Britain kwi-European Union (iBrexit) iphumelela, ingadonsela izimakethe zikazwelonke zezimali, imali engenayo eguquguqukayo nengaguquki. Njengomphumela wokuhlanganiswa kweSpain ezinhlanganweni zomphakathi. Ngisho nokuqina okukhulu, okususelwa ezinkingeni zomnotho wayo, nalokho ingahamba ngokuwa okucijile, engabuyisela umnotho waseSpain, futhi, ekukhanyeni kwabaqageli abakhulu.
Kufanele uzame ukuthi lesi sinqumo sabantu baseBrithani asikubambisi emdlalweni, ngoba imiphumela engaba nayo emnothweni wakho inzima kakhulu. Kuze kufane nokucindezeleka okukhulu okukhiqizwe kusuka ku-2007. Kepha ngenzuzo yokuthi njengamanje ungasigwema lesi simo esiyingozi kwizintshisekelo zakho. Kuzodingeka ubeke okuthile engxenyeni yakho kuphela.
Futhi kuphi ubungeke ukhiphe isinqumo sokubuyela emuva kumadiphozi wempilo yakho yonke. Yize bekhiqiza inzuzo embi okwamanje. Lapho kunzima kakhulu ukunqoba isithiyo esingu-0,50%, ngaphandle kokuthi usebenzise amasu athile ukusithuthukisa. Kepha okungenani uzoba nokonga okuqinisekisiwe, futhi njalo ukhokhelwe ngenzuzo encane. Ukuba ngenye yezindlela zokugcina okufanele ugweme ukuphuma emdlalweni ngaphambi kwemicimbi ezokwenzeka eGreat Britain ezinsukwini ezizayo.
Izeluleko eziyi-8 zokuvikela ukonga kwakho
Ngemuva kokuphakamisa zonke izehlakalo ezingase zivele ebusweni bukaBrexit, ngeke kulimaze ukuthi usesimweni sokusebenzisa ngokuqondisayo iziqondiso ezithile zokuziphatha ezingaba wusizo olukhulu kulesi simo esiyinkimbinkimbi amazwe e-EU azobhekana naso, ngaphandle kokukhetha . Futhi nokuthi ungabathuthukisa kusuka kulezi zincomo ezilandelayo.
Zama ukuqondisa utshalomali lwakho ngokulindela okuthile, futhi ungalindi kuze kwephuze kakhulu futhi ulahlekelwe yingxenye ebaluleke kakhulu yengcebo yakho, futhi ushiye namathuba ebhizinisi endleleni.
Kuzoba yizikhathi ezimbalwa lapho isikweletu sizoba yimpahla yezimali ebaluleke kakhulu onakho, futhi uzivikele ekungazinzi kwezimakethe zezimali. Kuzoba nezikhathi kamuva ukuze ukwazi ukuhambisa utshalomali ngokuphepha okukhulu.
Ngeke ube nokhetho ngaphandle kokwazi ifayili le- ukuvela kwazo zonke izimakethe zezezimali, ukuze ubheke amazinga onawo ngaphakathi nangaphandle.
Kufanele useshe imikhiqizo ephephe kunazo zonke, lapho ukuvikeleka kwalo kudlula khona okunye ukucatshangelwa. Futhi ukuqeda lezo ezithwala inani elikhulu kakhulu lezingozi.
Kufanele utshale imali kuphela ku- amamodeli owaziyo ngempela, sisuka kude nalabo lapho isipiliyoni singelutho neze. Lezi akuzona izikhathi eziqondile zokuzama ngazo, ngoba ungashiya imali eningi endleleni.
Kungakuhle kakhulu ukuthi ukhethe amafomethi aguquguqukayo kakhulu ezijwayela zonke izimo ezethulwe izimakethe zezezimali, kokuthambekela kwaphezulu nokwehla.
Ungazibuza ikhefu ekutshalweni kwakho inqobo nje uma izimo zingacaciswa, futhi ikakhulukazi uma izimakethe ziba ngaphezu kwezinkinga. Okungenani uze ubuye eholidini.
Thatha isinyathelo ngokuzimisela, kodwa ngaphezu kwakho konke ngokuqapha. Kuzoba yikhambi elingcono kakhulu lokuvikela yonke imali oyongile ekuqhamukeni kwesiyaluyalu esiqinile ezimakethe zezimali, ezingadala izingozi ezinkulu. Ungakhohlwa, ngoba ezinsukwini ezimbalwa kungahle kube sekwephuze kakhulu ukusebenzisa lezi zindlela ezikhethekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Imiphumela yeBrexit
Izimali zokutshala imali kumasheya, inketho enolaka kakhulu